कटौतीशील र प्रेरक तर्कहरु को बीच अंतर
तर्कहरुमा कटौती र प्रेरक तर्क
तर्कसंगत तर्कको अध्ययनमा, तर्कहरू दुई कोटामा विभाजित गर्न सकिन्छ: कटौती र प्रेरक। कटौतीशील तर्कलाई कहिले काँही तर्कको "शीर्ष-डाउन" रूपमा वर्णन गरिएको छ, जबकि आचरण तर्कलाई "तल-अप" मानिन्छ।
एक कटौती तर्क के हो?
एक कटौती तर्क एक छ जसमा साँचो परिसरले साँचो समापनको ग्यारेन्टी दिन्छ। अन्य शब्दहरूमा, परिसर सत्य तर तर निष्कर्ष गलत हुन असम्भव छ।
यसकारण, निष्कर्षमा अवश्य अवस्थित परिसर र इन्भेन्टबाट। यस तरिकामा, एक साँचो आधार दावी (निष्कर्ष) को लागि एक निश्चित सबूत सत्यको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। यहाँ एक क्लासिक उदाहरण हो:
एसोसिएट एक व्यक्ति (आधार) थियो
सबै पुरुषहरू मौलिक (आधार) हुन्।
सिट्रेट न्यानो थियो (निष्कर्ष)
तर्कको सार, गणित रूपमा, यदि: A = B, र B = C, त्यसपछि A = C.
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यदि परिसर सही हो (र तिनीहरू हुन्), त्यसपछि यो निष्कर्ष गलत हुन निष्कर्षमा सम्भव छैन। यदि तपाईंसँग सही ढाँचा कटौतीशील तर्क छ र तपाईं परिसरको सत्य स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंले निष्कर्षको सत्यलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ; यदि तपाईंले यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो भने, तपाईं तर्कलाई अस्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ ती तर्कहरू छन् जुन, केही विद्रोहसँग तर्क गर्छन् कि राजनीतिज्ञ कहिलेकाहीँ यस्ता गिरफ्तारीहरूको दोषी-सबै तर्कको विरुद्ध कटौतीकारी निष्कर्ष अस्वीकार गर्छन्।
आचरण तर्क के हो?
एक प्रेरक तर्क, कहिलेकाहिँ तल तल माथि तर्क, एक छ जसमा परिसर निष्कर्षको लागि बलियो समर्थन प्रदान गर्दछ, तर यो एक निश्चित छैन।
यो एक तर्क हो जसमा परिसर यस तरिका को निष्कर्ष समर्थन गर्न को लागी हो कि यदि परिसर सच हो, यो असंभव छ कि निष्कर्ष गलत हुनेछ। यसकारण, निष्कर्षमा परिसर र इन्टिभेसनहरूबाट सम्भव छ। यहाँ एक उदाहरण हो:
سقट ग्रीक (आधार) थियो।
अधिकतर ग्रीकहरूले माछा (आधार) खाउँछन्।
समाजले माछा खाई (समापन)।
यो उदाहरणमा, यदि दुवै परिसर सही हो भने, यो अझै पनि निष्कर्ष गलत हुन सक्छ (शायद सुक्रेट माछा एलर्जी थियो, उदाहरणको लागि)। शब्द जो आक्रामक रूपमा आर्गुमेन्टको रूपमा तर्क चिन्ह लगाउन सकिन्छ र अनि सम्भवतः सम्भावना - सम्भवतः सम्भवतः सम्भवतः र सम्भवतया शब्दहरू समावेश गर्दछ।
कटौती तर्कहरू र प्रारम्भिक तर्कहरू
यसले लगाउन सकिने आर्गुमेन्टहरू कटौती तर्कहरू भन्दा कमजोर छन् जस्तो लाग्दछ किनभने कटौती तर्कमा सधैँ अवस्थित निष्कर्षमा पुग्ने परिसरको सम्भावना मात्र रहनेछ, तर यो केवल एक निश्चित बिन्दुमा सहि हो। कटौती तर्कहरूसँग, हाम्रा निष्कर्षहरू पहिले नै समावेश छन्, भित्री रूपमा, हाम्रो परिसरमा। यसको अर्थ छ कि कटौती तर्कले नयाँ जानकारी वा नयाँ विचारहरूमा आउन कुनै मौका प्रदान गर्दैन - सर्वोत्तम, हामी जानकारी देखाइएको छ जुन पहिले अज्ञात वा अपरिचित गरिएको थियो। यसरी, कटौती तर्कहरूको सत्य-संरक्षण संरक्षण प्रकृति रचनात्मक सोचको खर्चमा आउँछ।
अर्कोतर्फ आचरण तर्कहरू हामीलाई नयाँ विचारहरू र सम्भावनाहरू प्रदान गर्नुहोस्, र यसैले कटौती तर्कहरू प्राप्त गर्न असम्भव तरिकाले संसारको बारेमा हाम्रो ज्ञान विस्तार गर्न सक्छ।
यसकारण, कटौतीशील तर्कहरू गणितको साथ प्रायः प्रायः प्रयोग गर्न सकिन्छ, अधिकतर अन्य क्षेत्रहरु को अधिक खुले-समाप्त ढाँचा को कारण प्रेरक तर्क को व्यापक उपयोग गर्दछ। वैज्ञानिक प्रयोग र सबैभन्दा रचनात्मक प्रयास, सब पछि, "शायद," "शायद" वा "के भयो भने?" संग सुरु गर्नुहोस्। सोच को मोड, र यो प्रेरक तर्क को दुनिया हो।
व्यावहारिकता के हो?
जीन पॉल सर्ट्रेको जीवनी
एथाइज्म एक इस्लाम, धर्म, दर्शन, विचारधारा वा विश्वास प्रणाली हो
ज्योतिष एक छद्मिकता छ?
तीन धर्म, एक भगवान? Judaism, Chrisianity, र इस्लाम
मानववाद भनेको के हो?
पाहुनाहरूको लागि शीर्ष कुराकानी कुराकानी
बायरन नेल्सन पुरस्कार
सरल ब्याज कार्यपत्रहरू जवाफका साथ
शीतकालीन जेम्स अनुसूची को लागि एक गाइड (2017)
बीटल्स गीत: "यहाँ सूर्य आउछ"
बुवानान अन्तिम नाम उत्पत्ति र अर्थ
कठिनाई विश्वविद्यालय प्रवेश
Venus in Cancer - Love Signs
शीर्ष 10 हटेस्ट देश महिलाहरु
60 सेकेन्डमा कलाकारहरू: तेज्का ओसुमू 手塚 治虫
इराकमा वर्तमान स्थिति
2016 मा राष्ट्रपति को लागि डोनाल्ड ट्रम्प को पागल अभियान
2017 - 2018 अधिसूचना जारी मिति मिति
RICCI - उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
औद्योगिक क्रांतिको शुरुवातको गाइड
के तपाईं सताएको प्रेमको साथ घिमिरे हृदयलाई उद्धरण गर्न सक्नुहुन्छ उद्धरण?
के तपाईंको लागि सही छनौट क्याम्पसमा बस्दै हुनुहुन्छ?
लामाहरू पाक कला र व्यञ्जनहरू
शीर्ष 25 शहरी किंवदंतियों
1812 को युद्ध: यूएसएस चेसपेक
Owl Folklore र Legends
नमूना आकार को एक ठूलो त्रुटि को एक निश्चित मार्जिन को लागि आवश्यक छ?
जर्मन प्रस्तुतीकरणको परिचय
190 दशक को शीर्ष5देश कलाकार
ठाडो स्केटबोर्डिङ आधारभूत
कांग्रेसका सदस्यहरू द्वारा5जना अध्यक्षहरू थिए